ကိုယ်ထည်တွင် အက်ကြောင်းတွေ့ရှိပြီးနောက် ကျည်ဆံရထား ၄၈၀၀ ကိုစစ်ဆေးရန် ဂျပန်အမိန့်ထုတ် - Yangon Media Group
ကိုယ်ထည်တွင် အက်ကြောင်းတွေ့ရှိပြီးနောက် ကျည်ဆံရထား ၄၈၀၀ ကိုစစ်ဆေးရန် ဂျပန်အမိန့်ထုတ်
တိုကျို ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ၊ ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းတွင် ကျည်ဆံရထား ကိုယ်ထည်တစ်ခု၌ အက်ကြောင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကျည်ဆံရထား ၄၈၀၀ လုံးကို စစ်ဆေးရန် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ကိုင်ချီ အီရှီက အမိန့်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း နီပွန်ရုပ်သံက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သောကြာနေ့တွင် ပြုလပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် မစ္စတာ အီရှီက “shinkansen” ကျည်ဆံရထား လုပ်ငန်းကို ပြေးဆွဲလုပ်ကိုင်နေသော ဂျပန်ရထားကုမ္ပဏီ ၅ ခုအနေုဖြင့် ၄င်းတို့၏ ရထားများအားလုံးကို စစ်ဆေးမှု ချက်ချင်း လုပ်ဆောင်ရန် အမိန့်ထုတ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျည်ဆံရထားတစ်စင်း၏ ရထားတွဲအောက်ရှိ ကိုယ်ထည်တွင် အက်ကြောင်းတစ်ခုနှင့် ဆီယိုစိမ့်မှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် ယင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရထားပေါ်ရှိ ဝန်ထမ်းများက မီးလောင်နံ့နှင့် ထူးဆန်းသော အသံများထွက်ပေါ်နေကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့ပြီးနောက် သုံးနာရီကျော်အကြာတွင် ယင်းအက်ကွဲကြောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတာဝန်ရှိသူများက အဆိုပါ အက်ကွဲကြောင်းသည် အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ရပ်ဆိုးတစ်ခုအနေဖြင့် ရထားလမ်းချော်မှု ကို ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ရထားပေါ်ရှိ ခရီးသည် ၁၀၀၀ ကျော်မှာလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဂျပန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုံခြုံမှုဘုတ်အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက”ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်ပြီးတော့ အဲဒါဟာ မတော်တဆမှု တစ်ခုဆီကို ဦးတည်စေနိုင်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားများကို မှောင်ခိုခိုးသွင်းခဲ့သော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်း ၆၀၀ က??
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာဗားကျွန်းတွင် ပြင်းအား ၆ ဒသမ ၃ မဂ္ဂနီကျုရှိ ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်
မန္တလေးမြို့ အနီးဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများတွင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ရွှေချည်ထိုး လုပ်ကိုင်သူများ
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၌ ဝါစိုက်ပျိုးမှု တိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာ မူကြမ်းကို ဒေသခံများအကြံဥာဏ် ??
စုံထောက်ဝတ္ထုအသစ် ရေးသား ပြီးစီးခဲ့သော ဂျေကေရိုးလင်း